धनुषको अर्को गीतले तोड्यो रेकर्ड, युट्युबमा पायो १ अर्ब बढी ‘भ्यू’: यस्तो छ भिडियो – Enepali Samchar
धनुषको अर्को गीतले तोड्यो रेकर्ड, युट्युबमा पायो १ अर्ब बढी ‘भ्यू’: यस्तो छ भिडियो
November 17, 2020 adminLeaveaComment on धनुषको अर्को गीतले तोड्यो रेकर्ड, युट्युबमा पायो १ अर्ब बढी ‘भ्यू’: यस्तो छ भिडियो
तमिल सुपरस्टार तथा रजनीकान्तका ज्वाईं धनुषको अर्को एउटा गीतले नयाँ रेकर्ड कायम गरेका ेछ । उनको फिल्म मारी टुको राउडी बेबी गीतले युट्यबमा १ बिलियन अर्थात् १ अर्ब बढी भ्यूजको रेकर्ड बनाएको छ । यो फिल्म सन् २०१८ मा रिलिज भएको थियो । फिल्ममा धनुष र कृष्णाले मुख्य भुमिका निभाएका छन् ।
धनुषले यसबारे जानकारी दिँदै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कति मिठो संयोग । कोलबेरी डीको नवौं वर्षगाँठमा राउडी बेबी गीतले एक बिलियन भ्यूको सीमा पार गरेको छ । एक बिलियन भ्यू हासिल गर्ने यो पहिलो दक्षिण भारतीय गीत हो भनेर जानकारी दिन पाउँदा हामी निकै सम्मानित महसुस गरिरहेका छौं । हाम्रो पूरा टिम मनैदेखि धन्यवाद अर्पण गर्दछ ।
यस्तै इतिहास धनुषको गीत कोलावेरी दीले रचेको थियो । यो गीत सन् २०११ मा रिलिज भएको साइकोलोजिक थ्रिलर थ्रीको थियो । १६ नोभेम्बर सन् २०११ मा रिलिज भएको गीत असाध्यै चर्चित भएको थियो । तमिल र अंग्रेजीमा लेखिएको यो गीतको शब्द धेरैको मुखमा झुण्डिन्थ्यो । यो गीतलाई पनि धनुषले लेखेका र गाएका थिए ।
नेपालमै भेटियो प्राकृतिक ताजमहल ! सच्चा नेपालीले सक्दो शेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुस !
एक ईमान्दार अनि असल श्रीमानको खोजीमा छु कोहि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला